Ganhuro Regumi Nembiri
1. Zvinetsoi zvakawanda zvirimo mudzimwe mhuri?
MOTOKARI yekare ichangobva kugezwa ndokuporichwa namafuta. Kuvapfuuri inopenya, inenge itsva. Asi pasi, ngura inoparadza iri kupedza muviri wemotokari. Kwakafanana nedzimwe mhuri. Kunyange zvazvo kuzvitarisiko zvokunze chinhu chiri chose chichiratidzika kuva chakaisvonaka, zviso zvinonyemwerera zvinovanza rutyo namarwadzo. Mukati zvinhu zvinoparadza zviri kupedza rugare rwemhuri. Zvinetso zviviri izvo zvinogona kuva neiyi tapuro kuva chiradza namasimba masimba.
KUPARADZA KUNOPARIRWA NOKUVA CHIRADZA
2. (a) Ndoupi uri murangariro weBhaibheri wokushandiswa kwezvinwiwa zvinodhaka? (b) Kuva chiradza chii?
2 Bhaibheri harishori kushandiswa kune mwero kwezvinwiwa zvinodhaka, asi rinoshora udhakwa. (Zvirevo 23:20, 21; 1 VaKorinte 6:9, 10; 1 Timotio 5:23; Tito 2:2, 3) Kuva chiradza, kunyange zvakadaro, kunopfuura udhakwa; kunyanyofunga nguva dzose zvinwiwa zvinoraradzisa nokusazvidzora nemhaka yokunwiwa kwazvo. Zviradza zvinogona kuva vanhu vakuru. Nenzira inosuruvarisa, izvo zvinogona kuvawo pwere.
3, 4. Rondedzera migumisiro yokuva chiradza pamukwanyina wechiradza napavana.
3 Bhaibheri kare kare rakaratidzira kuti kushandiswa kusakafanira kwezvinodhaka kunogona kuparadza rugare rwemhuri. (Dheuteronomio 21:18-21) Migumisiro inoparadza yokuva chiradza inonzwiwa nemhuri yose. Mudzimai anganyura munhamburiko dzokumisa kunwa kwechiradza kana kuti kugonana nomufambiro wacho usingafanozivikanwi. * Iye anoedza kuvanza doro, kurirasa, kuvanza mari yake, uye kukurudzira kuda kwake mhuri, upenyu, kunyange Mwari—asi chiradza chinongonwa. Sezvo nhamburiko dzake dzokudzora kunwa kwake dzichikundikana dzakundikanazve, anonzwa avhiringidzika uye asingakwanisi. Iye angavamba kutambura norutyo, nehasha, nokuva nemhaka, noruzazu, nefunganyo, uye nokushayiwa kuzviremekedza.
4 Vana havasati vachinzvenga migumisiro yokuva chiradza kwomubereki. Vamwe vanorohwa. Vamwe vanobatwa chibharo. Vangatozvishora vamene nokuda kwokuva chiradza kwomubereki. Kazhinji kazhinji simba ravo rokuvimba vamwe rinoparadzwa nomufambiro unochinja-chinja wechiradza. Nemhaka yokuti havagoni kutaura zvakanaka pamusoro pechiri kuitika pamusha, vana vangadzidza kudzvinyirira mirangariro yavo, kazhinji kazhinji nemigumisiro inokuvadza muviri. (Zvirevo 17:22) Vana vakadaro vangapinda chaizvo nouku kusazvivimba kana kuti kusazviremekedza mukuva munhu mukuru.
CHII CHINOGONA KUITA MHURI?
5. Kuva chiradza kunogona sei kudzorwa, uye nei ikoku kwakaoma?
5 Kunyange zvazvo zviremera zvakawanda zvichitaura kuti kuva chiradza hakugoni kuregwa, vakawanda zvikuru vanofunga kuti mwero wakati wokurega unobvira nechirongwa chokurega chose chose. (Enzanisa naMateo 5:29.) Zvisinei, kuita kuti chiradza chigamuchire betsero kuri nyore zvikuru kutaurwa nezvako kupfuura kuita, sezvo kazhinji kazhinji chichiramba kuti chine chinetso. Kunyange zvakadaro, apo mitezo yemhuri inoita chiito chokubata nenzira iyo kuva chiradza kwakavatapura nayo, chiradza chingavamba kuziva kuti chine chinetso. Mumwe chiremba ane ruzivo rwokuzviwanira mukubetsera zviradza nemhuri dzazvo akati: “Ndinofunga kuti chinhu chinokosha zvikurusa ndechokuti mhuri ingoita mabasa ayo okurarama nenzira yakanakisisa yavanogona. Chiradza chinotarisana zvikuru nokuti musiyano mukuru sei uri pakati pacho norutivi rwose rwasara rwemhuri.”
6. Ndaapi ari manyuko akanakisisa ezano nokuda kwemhuri dzine mutezo wemhuri uri chiradza?
6 Kana mumhuri menyu mune chiradza, zano rakafuridzirwa reBhaibheri rinogona kukubetserai mukurarama nenzira yakanakisisa inobvira. (Isaya 48:17; 2 Timotio 3:16, 17) Rangarira dzimwe nheyo dzakabetsera mhuri kubata nenzira inobudirira nokuva chiradza.
7. Kana mumwe mutezo wemhuri uri chiradza, ndiani ane mhaka?
7 Regai kugamuchira kushora kwose. Bhaibheri rinoti: “Munhu mumwe nomumwe uchafanira kutakura mutoro wake,” uye, “mumwe nomumwe wedu uchazvidavirira kuna Mwari.” (VaGaratia 6:5; VaRoma 14:12) Chiradza chingaedza kukarakadza kuti mitezo yemhuri ine mhaka. Somuenzaniso, icho chingati: “Kana mukandibata zviri nani, handinganwi.” Kana vamwe vachiratidzika kuva vanobvumirana nacho, vari kuchikurudzira kupfuurira kunwa. Asi kunyange kana tikaitwa vanyajambwa namamirire ezvinhu kana kuti navamwe vanhu, tose zvedu—kubatanidza zviradza—tine mhaka yechatinoita.—Enzanisa naVaFiripi 2:12.
8. Ndedzipi dziri dzimwe nzira idzo chiradza chingabetserwa nadzo kutarisana nemigumisiro yechinetso chacho?
8 Musarangarira kuti nguva dzose munofanira kudzivirira chiradza pamigumisiro yokunwa kwacho. Chimwe chirevo cheBhaibheri pamusoro pomumwe munhu akashatirwa chingagona kushanda zvakaenzana kuchiradza: “Kana uchimurwira, unongozvinyanyisa.” (Zvirevo 19:19) Regai chiradza chinzwe migumisiro yokunwa kwacho. Regai chichenese tsvina yacho kana kuti ridzirai runhare mushandirwi wacho mangwanani apashure pokunwa.
9, 10. Neiko mhuri dzezviradza dzichifanira kugamuchira betsero, uye ibetsero yaani zvikurukuru yadzinofanira kutsvaka?
9 Gamuchirai betsero inobva kuvamwe. Zvirevo 17:17 inoti: “Shamwari inoda nguva dzose; hama inoberekerwa kuti ibatsire pakutambudzika.” Apo mumhuri menyu munenge mune chiradza, mune nhamo. Munoda betsero. Musazengurira kuvimba ne‘shamwari dzechokwadi’ nokuda kwetsigiro. (Zvirevo 18:24) Kutaura navamwe vanonzwisisa chinetso chacho kana kuti vakatarisana namamirire ezvinhu akafanana kungakugoverai zvikarakadzo zvinoshanda pamusoro pechokuita nechokusaita. Asi ivai vakadzikama. Taurai naavo munovimba navo, avo vachadzivirira “zvakavanda” zvenyu.—Zvirevo 11:13.
10 Dzidzai kuvimba navakuru vechiKristu. Vakuru vari muungano yechiKristu vanogona kuva manyuko makuru ebetsero. Ava varume vakakura mumudzimu vakadzidza Shoko raMwari uye vane ruzivo rwokuzviwanira mukushandiswa kwenheyo dzaro. Vanogona kubvumikisa kuva “soutiziro pamhepo, sechivando pakunaya kukuru kwemvura, senzizi dzemvura panzvimbo yakaoma, somumvuri wedombo guru panzvimbo yafa nenyota.” (Isaya 32:2) Vakuru vechiKristu havasati vachingodzivirira bedzi ungano yose zvayo papesvedzero dzinokuvadza asi vanonyaradzawo, vanozorodza, uye vanofarira somunhu oga vanhu vane zvinetso. Shandisai zvakazara betsero yavo.
11, 12. Ndiani anogovera betsero hurusa nokuda kwemhuri dzezviradza, uye tsigiro iyoyo inopiwa sei?
11 Kupfuura zvose, wanai simba kuna Jehovha. Bhaibheri rinotivimbisa noushamwari, kuti: “Jehovha uri pedyo navane mwoyo yakaputsika, unoponesa vane mweya yakapwanyika.” (Pisarema 34:18) Kana muchinzwa maodzwa mwoyo kana kuti maparadzwa mumudzimu nemhaka yedzvinyiriro dzokugara nomutezo wemhuri uri chiradza, zivai kuti “Jehovha uri pedyo.” Iye anonzwisisa kuti mumirire wezvinhu wemhuri yenyu wakaoma sei.—1 Petro 5:6, 7.
12 Kudavira izvo Jehovha anotaura muShoko rake kunogona kukubetserai kugonana nefunganyo. (Pisarema 130:3, 4; Mateo 6:25-34; 1 Johane 3:19, 20) Kufunda Shoko raMwari nokurarama maererano nenheyo dzaro kunokugonesai kugamuchira betsero yomudzimu mutsvene waMwari, uyo unogona kukushongedzerai “simba rinopfuura renguva dzose” kuti mubudirire kubva pazuva rimwe kusvika pane rinotevera.—2 VaKorinte 4:7, NW. *
13. Ndechipi chiri chinetso chechipiri chinoparadza mhuri dzakawanda?
13 Kushandiswa zvisina kufanira kwezvinodhaka kunogona kutungamirira kuchimwe chinetso icho chinoparadza mhuri dzakawanda—masimba masimba omumhuri.
KUKUVADZA KUNOPARIRWA NAMASIMBA MASIMBA OMUMHURI
14. Masimba masimba omumhuri akavamba rini, uye ndoupi uri mumirire wezvinhu nhasi?
14 Chiito chamasimba masimba chokutanga munhau yavanhu chakanga chiri chiitiko chamasimba masimba omumhuri aibatanidza mukoma nomunun’una, Kaini naAbheri. (Genesi 4:8) Kubvira panguva iyeyo, rudzi rwomunhu rwakatambudzwa nomutoo uri wose wamasimba masimba omumhuri. Kune varume vanorova vadzimai, vadzimai vanodenha varume, vabereki vanorova noutsinye vana vavo vaduku, uye vana vakura vanobata zvisina kufanira vabereki vavo vakwegura.
15. Mitezo yemhuri inotapurwa sei mumurangariro namasimba masimba omumhuri?
15 Kukuvadza kunoparirwa namasimba masimba omumhuri kunopfuura mavanga omuviri. Mumwe mudzimai airohwa akati: “Pane kuva nemhaka kwakawanda nemanyadzi zvaunofanira kubata nazvo. Mangwanani akawanda zvikurusa, unongoda zvako kuramba wakarara, uchikarira kuti chaingova zvacho chiroto chakashata.” Vana vanocherekedza, kana kuti vanotambura masimba masimba omumhuri ivo vamene vangava namasimba masimba apo vanokura ndokuva nemhuri dzavo vamene.
16, 17. Chii chiri kushatiswa kwemirangariro, uye mitezo yemhuri inotapurwa sei nako?
16 Masimba masimba omumhuri haana kuganhurirwa kukurova. Kazhinji kazhinji denho yacho ndeyamashoko. Zvirevo 12:18 inoti: “Mumwe uriko unotaura nokusarangarira zvinobaya somunondo.” Izvi “zvinobaya” izvo zvinoratidzira masimba masimba omumhuri zvinobatanidza kutuka nokupopota, pamwe chete netsoropodzo yenguva dzose, kunyomba kunozvidza, uye tyisidziro dzamasimba masimba omuviri. Maronda amasimba masimba emirangariro haaoneki uye kazhinji kazhinji haacherekedzwi navamwe.
17 Kunosuruvarisa zvikuru ndiko kurohwa kwendangariro yomwana—kutsoropodzwa kwenguva dzose nokuzvidzwa kwamano omwana, ungwaru, kana kuti ukoshi somunhu. Kutuka kwakadaro kunogona kuparadza kuzvivimba kwomwana. Chokwadi, vana vose vanoda chirango. Asi Bhaibheri rinorayiridza vanababa, kuti: “Regai kunetsa vana venyu, kuti varege kuora mwoyo.”—VaKorose 3:21.
NZIRA YOKUDZIVISA NAYO MASIMBA MASIMBA OMUMHURI
18. Masimba masimba omumhuri anovamba papi, uye chii chinoratidza Bhaibheri kuti ndiyo nzira yokuamisa nayo?
18 Masimba masimba omumhuri anovamba mumwoyo nendangariro; nzira yatinoita nayo zvinhu inovamba nenzira yatinofunga nayo. (Jakobho 1:14, 15) Kuti arege masimba masimba, mutambudzi anofanira kushandura mafungire ake. (VaRoma 12:2) Ikoko kunobvira here? Hungu. Shoko raMwari rine simba rokuchinja vanhu. Rinogona kudzura kunyange mirangariro “ine simba zvikuru” inoparadza. (2 VaKorinte 10:4, NW; VaHebheru 4:12) Zivo yakarurama yeBhaibheri inogona kubetsera kuparira chinjo yakakwana kwazvo muvanhu zvokuti vanonzi vanopfeka unhu hutsva.—VaEfeso 4:22-24; VaKorose 3:8-10.
19. MuKristu anofanira kurangarira ndokubata sei mukwanyina weroorano?
19 Murangariro womukwanyina weroorano. Shoko raMwari rinoti: “Varume vanofanira kuda vakadzi vavo semiviri yavo. Unoda mukadzi wake, unozvida.” (VaEfeso 5:28) Bhaibheri rinotaurawo kuti murume anofanira kupa mudzimai wake “[rukudzo somudziyo, NW] une simba duku.” (1 Petro 3:7) Vadzimai vanorayirwa kuti “vade varume vavo” no“kuvaremekedza zvikuru.” (Tito 2:4; VaEfeso 5:33, NW) Zvirokwazvo hakuna murume anotya Mwari anogona kutaura zvechokwadi kuti anokudza chaizvoizvo mudzimai wake kana achimurova kana kuti achimutuka. Uye hakuna mudzimai anozhambira murume wake, anotaura kwaari zvakashata, kana kuti anomutuka nguva dzose anogona kutaura kuti anomuda nokumuremekedza zvirokwazvo.
20. Vabereki vane mutoro pamberi paani nokuda kwavana vavo, uye nei vabereki vasingafaniri kuva nekariro dzisina mufungo pamusoro pavana vavo?
20 Kurangarirwa kwakafanira kwavana. Vana vanofanirwa, hungu, vanoda, rudo nengwariro zvinobva kuvabereki vavo. Shoko raMwari rinodana vana kuti “nhaka inobva kuna Jehovha” uye “mubayiro.” (Pisarema 127:3) Vabereki vane mutoro pamberi paJehovha wokutarisira nhaka iyoyo. Bhaibheri rinotaura nezve“zvinhu zvomwana” uye “upenzi” hwoukomana. (1 VaKorinte 13:11; Zvirevo 22:15) Vabereki havafaniri kushamiswa kana vakasangana noupenzi muvana vavo. Vaduku havazi vanhu vakuru. Vabereki havafaniri kuda zvinopfuura zvakafanira zera romwana, mamirire ezvinhu emhuri, uye mano.—Ona Genesi 33:12-14.
21. Ndeipi iri nzira youmwari yokurangarira nayo vabereki vakwegura neyokubata navo?
21 Kurangarirwa kwavabereki vakwegura. Revhitiko 19:32 inoti: “Unofanira kusimukira wachena vhudzi, nokukudza mutana.” Mutemo waMwari nokudaro waitsigira kuremekedzwa nokukudzwa kwavakwegura. Ikoku kungava denho apo mubereki akwegura anoratidzika kuva anonyanyorayira kana kuti anorwara uye zvichida asingafambi kana kuti kufunga nokukurumidza. Zvisinei, vana vanoyeuchidzwa kuti “vadzosere zvakafanira kuvabereki vavo.” (1 Timotio 5:4) Ikoku kungareva kuvabata noruremekedzo norukudzo, zvichida kunyange kuvapa mari. Kubata zvisina kufanira vabereki vakwegura mumuviri kana kuti neimwe nzira kunopesana chaizvoizvo nenzira iyo Bhaibheri rinotiudza kuita nayo.
22. Nderipi riri vara guru mukukurira masimba masimba omumhuri, uye rinogona sei kushandiswa?
22 Sakurirai kuzvidzora. Zvirevo 29:11 inoti: “Benzi rinobudisa hasha dzaro dzose; asi munhu wakachenjera unodzidzora nokudzinyaradza.” Unogona sei kudzora chimiro chako chendangariro? Panzvimbo pokurega vhiringidziko ichikura mukati, ita nokukurumidza kupedza zvinetso zvinomuka. (VaEfeso 4:26, 27) Ibva panzvimbo yacho kana uchizvinzwa umene uchirasikirwa nokuzvidzora. Nyengeterera mudzimu mutsvene waMwari kuti uparire kuzvidzora mauri. (VaGaratia 5:22, 23) Kufamba-famba kana kuti kuita kurovedzwa kumwe kwakati kwomuviri kungakubetsera kudzora mirangariro yako. (Zvirevo 17:14, 27) Edza kuva ano“nonoka kutsamwa.”—Zvirevo 14:29, NW.
KUPARADZANA KANA KUTI KURAMBA MURI PAMWE CHETE HERE?
23. Chii chingaitika kana mumwe mutezo womuungano yechiKristu ukatera waterazve uye nenzira yokusapfidza kukufufutirwa nehasha kune masimba masimba, zvichida kubatanidza kurova mhuri yake?
23 Bhaibheri rinoisa pakati pamabasa anoshorwa naMwari “kuvengana, negakava, . . . nokutsamwa” uye rinotaura kuti “vanoita zvakadai havangadyi nhaka youshe hwaMwari.” (VaGaratia 5:19-21) Naizvozvo, munhu upi noupi anotaura kuva muKristu anotera aterazve uye nenzira yokusapfidza kukufufutirwa nehasha kune masimba masimba, zvichida kubatanidza kurova mukwanyina kana kuti vana, anogona kudzingwa muungano yechiKristu. (Enzanisa na2 Johane 9, 10.) Neiyi nzira ungano inochengetwa isina vanhu vakaipa.—1 VaKorinte 5:6, 7; VaGaratia 5:9.
24. (a) Vakwanyina vanobatwa zvisakafanira vangasarudza kuitei? (b) Shamwari dzinoitira hanya navakuru vangatsigira sei mukwanyina anobatwa zvisina kufanira, asi chii chavasingafaniri kuita?
24 Zvakadini navaKristu panguva ino vari kurohwa nomukwanyina akaipa asingaratidzi chiratidzo chokuchinja? Vamwe vakasarudza kugara nomukwanyina akaipa nokuda kwechikonzero chakati. Vamwe vakasarudza kuenda, vachirangarira kuti utano hwavo hwomuviri, hwendangariro, uye hwomudzimu—zvichida kunyange upenyu hwavo—huri mungozi. Icho nyajambwa wamasimba masimba omumhuri anosarudza kuita muaya mamirire ezvinhu chisarudzo chomunhu oga pamberi paJehovha. (1 VaKorinte 7:10, 11) Shamwari dzine vavariro dzakanaka, hama dzokunyama, kana kuti vakuru vechiKristu vangada kupa betsero nezano, asi havafaniri kudzvinyirira nyajambwa kuti aite chiito chipi nechipi chakati. Ichocho chisarudzo chake amene chokuita.—VaRoma 14:4; VaGaratia 6:5.
MUGUMO KUZVINETSO ZVINOPARADZA
25. Ndechipi chiri chinangwa chaJehovha nokuda kwemhuri?
25 Apo Jehovha akabatanidza Adhama naEvha muroorano, haana kutongoita chinangwa kuti mhuri dzinofanira kupedzwa nezvinetso zvinoparadza zvakadai sokuva chiradza kana kuti masimba masimba. (VaEfeso 3:14, 15) Mhuri yaifanira kuva nzvimbo umo rudo norugare zvaizokura uye mutezo mumwe nomumwe waizoita kuti zvinodikanwa zvawo zvendangariro, zvemirangariro, uye zvomudzimu zvitarisirwe. Nokutanga kwechivi, zvisinei, upenyu hwemhuri hwakakurumidza kuipa.—Enzanisa naMuparidzi 8:9.
26. Nderamangwana rakadini rakamirira avo vanoedza kurarama maererano nezvinodikanwa zvaJehovha?
26 Nomufaro, Jehovha haana kurega chinangwa chake nokuda kwemhuri. Iye anopikira kuunza nyika itsva ine rugare umo vanhu “vachagara zvakanaka [pasina, NW] ungavatyisa.” (Ezekieri 34:28) Panguva iyoyo, kuva chiradza, masimba masimba omumhuri, uye zvimwe zvinetso zvose zvinoparadza mhuri nhasi zvichava zvinhu zvomunguva yakapfuura. Vanhu vachanyemwerera, kwete kuti vavanze rutyo namarwadzo, asi nemhaka yokuti vari ku“farikanya kwazvo norugare rukuru.”—Pisarema 37:11.
^ ndima 3 Kunyange zvazvo tichinongedzera kuchiradza somunhurume, nheyo dziri muno dzinoshanda zvakaenzana apo chiradza chinenge chiri munhukadzi.
^ ndima 12 Mudzimwe nyika, mune nzvimbo dzokurapira, zvipatara, uye zvirongwa zvokurega izvo zvine unyanzvi mukubetsera zviradza nemhuri dzazvo. Kutsvaka betsero yakadaro kana kuti kwete chisarudzo chomunhu oga. Watch Tower Society haitsigiri kurapa kwakati kupi nokupi. Zvisinei, ngwariro inofanira kushandiswa kuitira kuti, mukutsvaka betsero, munhu haasati achibatanidzwa mumibato inobvumiranisa nheyo dzapaMagwaro pane zvisina kufanira.
IDZI NHEYO DZEBHAIBHERI DZINOGONA SEI KUBETSERA . . . MHURI KUDZIVISA ZVINETSO ZVINGAPARIRA KUPARADZA KWAKAKOMBA?
Jehovha anoshora kushandiswa zvisina kufanira kwezvinwiwa zvinodhaka.—Zvirevo 23:20, 21.
Munhu mumwe nomumwe ane mutoro wezviito zvake.—VaRoma 14:12.
Pasina kuzvidzora hatigoni kubatira Mwari nenzira inogamuchirika.—Zvirevo 29:11.
VaKristu vechokwadi vanokudza vabereki vavo vakwegura.—Revhitiko 19:32.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Munogona Kukurira Zvinetso Zvinoparadza Mhuri
fy chits. 12 pp. 142-152